ब्लग - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
सुखी बनाऊँ हाम्रो संसार, क्रान्ति गर्ने समय छैन
२२ असार - केही दिनअघि अग्रज पत्रकार नारायण वाग्ले दाइसँग काठमाडौँमा पैदलयात्रा गर्ने मौका मिल्यो। कुराकानीकै क्रममा दाइले सोध्नुभयो, ‘अनि सरला, बिहा गर्ने, परिवार बसाउने सोच के छ ?’ मैले भनेँ ‘मानव हुँ मानव जीवनको सम्पूर्ण आयाम भोगेर मर्ने हो दाइ।’
साथी, तीजको सम्झना र एक पल
१७ भदौ - बाह्रैमास परिराख्ने झरीलाई छिचोल्दै जसोतसो समयमै अफिस पुगेँ। कोठामा पुग्दा थाहा पाएँ, उसले कफीको लागि मलाई कुरिरहेकी रहिछ। उसो त म कफीको त्यति सौखिन हैन तर उसको संगतले म पनि कफी पारखी भएकी छु।
एक 'थाङ्गला' अनुभूति
४ असोज - तिबेतियनहरु भौतिक सुरक्षा, राजनैतिक शरण, धर्म र संस्कृतिको रक्षालगायतका कारण काठमाडौं आउँथे। यता आउँदा उनीहरुसँगै चलन, परम्परा र भाषा अर्थात् संस्कृति पनि आयो। उनीहरु डेरामा बस्थे।
समाजमा आँसुका बाछिटाको अर्थ
२९ साउन - 'समाजशास्त्रीहरू समाजका दुख्ख देखेर रुँदैनन्' भनेर दुई हप्ता अगाडि एमएका विधार्थीलाई पढाएका चैतन्य मिश्रलाई 'कहर'को विमोचनमा राम्ररी बोल्न पनि सकस पर्‍यो। कार्यक्रम सकिएपछि हामी (चैतन्य सरका पछिल्ला एमए विधार्थी)ले 'सर किताब पढेर निकै भावुक हुनु भएछ' भनेर कुरा गर्‍यौँ।
मेरो देशमा एभरेस्ट छ कि सगरमाथा?
३१ भदौ - साथीभाइसँगको छोटो भेटघाटपछि म घर फर्कन मात्र के लागेको थिएँ, मुसलधारे पानीले चुट्न थाल्यो। हिँडेरै घर पुग्ने सोच थियो तर ट्याक्सी नलिई सुखै भएन।
गाउँलाई लेखिएको एक लभलेटर
१ असोज - हामीले हिडेको गाँउमा पनि जताततै देखिन्नथे चामलका लाइन मात्र। हुँदैनथे छाउपडी गोठ लस्करै। गाँउ बाँचिरहेको हुन्थ्यो एउटा स्वभाविक जीवन। त्यसैले सिनेमामा संसारको भूगोलको कुनै एउटा गाँउ आफ्नै पारामा बोल्दै थियो नबोलेर सिनेमाको भाका। हिमालका लस्करहरू होइन, चियाका पसलहरू आँउथे। आँउथ्यो कतै बार्दली...
विनोद चौधरीकी श्रीमती सारिका भन्दै थिइन्, फेसबुकमै केही लेखौँ–लेखौँ लाग्छ
८ साउन - कहिलेकाहीं नेपालबाट पत्रकार मित्रहरू भन्छन्– टाढा बसेर नेपालबारे के लेखिरहेको? उनीहरूलाई जवाफ फर्काऊँ जस्तो लाग्छ– मेरो लागि नेपाल, हिन्दीका चर्चित गायक तलत मेहमुदले बनाउन खोजेको तर बन्न नसकिरहेको प्रेमिकाको तस्वीर जस्तै होः ‘तस्बिर बनाता हुँ, तस्बिर नहीं बनती...!’
भारतलाई सोधे हुन्थ्यो– निर जैले रिसाउनी ... ?
२७ भदौ - परम्परालाई पछ्याउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। भ्रमणपछि सदा झै भनिनेछ,‘भ्रमण अत्यन्त्य सफल रह्यो,’ र, यो भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपेको छ।’
हृदयको लेन्स जी–२० मा
२८ भदौ - फोटो पत्रकारिता मेरा लागि खुशीको पर्याय हो। एक हिसाबले स्वान्त सुखायको उपक्रम। र, अर्को हिसाबले म साँचो पेशाकर्मी हुनुको साँचै मूल्य। चाहे म जी–२० का लागि चीनको हान्जाउको त्यो भव्यतामा संसारकै शक्तिशाली नेतालाई क्यामेरा ताकिरहेको हुँ या अष्ट्रेलियन ओपन चल्दै गर्दाको मैदानी आँखी–झ्याल ढुकिरहेको, म...
कि हुनेले डुल्छ दिल्ली, कि नहुनेले
२७ भदौ - उनले डायलग मारे ‘जिना हे तो पिछे हट्, मर्ना हे तो आगे!’ अनि? ‘त्यो गुन्डा पछिपछि हट्यो रे। गोर्खालीको छोरा पो त बहिनी।’ उनका आँखा बिजुली जस्ता भए। त्यसपछि? ‘साला सब डराए। गुन्डा उचाल्ने चौकीका पुलिस पनि थरररर।’
सडक–बृद्धको एउटा उद्धार डायरी
२१ भदौ - हामीले उनलाई बोलायौं, ‘ए बा तपाईंको घर कहाँ हो?’ फोहोरको थुप्रो नजिकै लडिरहेका ती बृद्धले आँखाका ढकनी हल्लाउँदै हामीलाई पुर्लुक्क हेरे। फेरि सोध्यौं, ‘किन यसरी लडिरहनु भएको?’ उनले टाउको हल्लाए, केही बोलेनन्। निर्निमेष हामीलाई मात्र हेरिरहे। उनका ओठमा पाप्रा जमेका थिए। ओठ चलमलाउन खोज्दा कँलेठी...
रेडियोमा कन्डमको कुरा गर्दा घरमा आमाको गाली
७ साउन - यस्तै–यस्तै छन् रेडियो यात्रामा समेटिएका अनुभव। कतिले आफूलाई एकदमै आनन्द दिन्छन् भने कतिले पीडा। रेडियोभित्र फुपूलाई सास फेर्न गाह्रो भयो बुबा भनेर रेडियो सेट फुटाउन खोज्ने सानो मेरो भाईदेखि लिएर फिल्डमा जाँदा भगवान् ठान्ने मेरा स्रोताको मायाप्रति सधैँ कृतज्ञ छु।
सगरमाथा चढ्दै ‘हिलारी’
२ भदौ - न्युजिल्यान्डका ती हिलारी, सन् १९५३ मे, मा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढदै थिए। अमेरिकाकी यी हिलारी, सन् २०१६ को नोभेम्बरमा विश्वको उस्तै अग्लो ‘राजनीतिक सगरमाथा’ चढ्ने तरखरमा छिन्।
एक नाथे ..*
१७ कार्तिक -
डिआइजी सा’ब! नखाएको विष मलाई कसरी लाग्यो?
२१ भदौ - भदौ १९ गते प्रशारित साझा सवालमा आइजिपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको अन्तर्वार्ता हेरेपछि दंग भएँ। आइजिपी अर्याल त्यो अन्तर्वार्तामा प्रजातान्त्रिक प्रहरी प्रमुखकै रुपमा पेश भएको देखियो। प्रत्येक प्रश्नको उत्तर स्पष्ट, छोटो र शालिन ढंगमा दिँदै उनले न्यायमा पीडितहरुको पहुँच दिलाउनेमा विश्वस्त पारे।...
बेइजिङका ती दिन सम्झेर एक्लै मुस्कुराउँछु
२० भदौ - पाँच वर्षअघि पहिलो पटक म आफ्नो घरबाट धेरै टाढा जाँदै थिएँ। काठमाडौँको नेवार समुदायबाट आएकाले हो कि मेरो परिवार म प्रति एकदमै रक्षात्मक थियो। मैले घरबाट काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर यात्रा गर्ने अनुमती समेत पाएको थिइनँ। तर उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति समेत पाएपछि मैले खुसीपूर्वक बाहिर निस्कने स्वीकृती...
खुलेर व्यवस्थाको विरोध कहिले गर्ने?
१४ भदौ - नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर दुई सन्तान जन्माइसकेकी एक फिलिपिनी महिलाको हालैको मुलुक–बहिगर्मनसँगै नेपाली नारीवादबारे बहस सुरु भएको छ। आफू नेपाली नारीवादी आन्दोलनको उतिसारो जानकार नहुँदा–नहुँदै पनि केही नबोली रहन सकिएन।
१३ भदौ - निलम कार्की निहारिकाले 'नारीवादी भएर आफ्नो घर बिगार्न चाहन्न' भनेर दिएको अन्तर्वार्ताको चर्चा नसकिँदै सीमा आभासले पनि आफूलाई अरुले नारीवादी भने पनि आफू नारीवादी नभएको जिकिर गर्दै अन्तर्वार्ता दिइन्।
मूल प्रवाहीकरण गरौं मुद्दा
१५ भदौ - उल्लेख गरिसकेको सन्दर्भ हो। सान्दर्भिक लागेर फेरि गरें। नेपाल एफएममा महिला हिंसाबिरुद्ध अभियान कार्यक्रम चलाउँथ्यौ। एक दिन तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई फोन गरें उहाँकै मोबाइलमा।
किन पाकिस्तान र भारतपछि मात्र नेपाल आउँछ चिनियाँ मिडियामा?
१३ भदौ - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका विशेष दूत बनेर हालै बेइजिङ आएका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चीनका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसँग भेटेको खबर बेइजिङमा भन्दा पहिला काठमाडौँमा सार्वजनिक भयो। यो त बेइजिङकै राजनीतिक खबर थियो तर पनि नेपालीले पढेको केही घण्टापछि मात्र चिनियाँ भाषाका...
बम्बई जाँदो, रूपियाँ कमाउँदो
१९ भदौ - आडैमा कसैको भुनभुनले मेरो तन्द्रा भङ्ग भयो। ओहो! यो उकालोमा त म एक्लै पो छु। मेरो होश आयो।
दश लाखको नमूना घर! जब यो तस्विर देखेँ...
५ भदौ - जव सामाजिक सञ्जालमा यो फोटो देखियो, धेरै बेर म घोरिएँ। दुख, पीडा र वास्तविकताको एउटा दुर्दान्त मनोदशामा डुबेको महसुस भयो। १० लाख खर्चेर कुनै गैरसरकारी संस्थाले भूकम्पपीडितका लागि बनाएको भनिएको यो नमूना घरको हबिगतले नेपालमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरुको चरित्र र नियतलाई उदाङ्गो पारेको छ।
मन्त्री गगनलाई अपेक्षा-पत्र
१२ भदौ - मन्त्री गगनजी नमस्ते। अन्ततः तपाईं पनि मन्त्री हुनुभयो। यसअघिका अधिकांश मन्त्री र तीनका काम, गतिविधि र परिणाम हेर्दा तपाईंलाई बधाइ किन भनी हालुँ जस्तो पनि लाग्छ। हुनत, मैलै बधाइ दिनु वा नदिनुले तपाईंको सोच, अडान, व्यवहार र नेपालको पारम्परिक राजनीतिमा ठूलो घट–बढ हुनेवाला छैन।
पुरुष खराब हुँदैनन्, मन सुनौं
२७ साउन - ‘म नारीवादी हुँ। नारीवादी हुनु भनेको असमानताको विरोधी हुनु हो। आखिर हामीले चाहेको समाज यस्तै त हो।’ अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाको भर्खरैको चर्चित भनाइ हो यो। उनले महिलाको जीवन नजिकबाट बुझेर नियाल्नुले निर्धक्कसँग यसो भन्न सकेको पनि भनेका छन्। खासगरी ह्वाइटहाउसमा हुर्कंदै गरेका आफ्ना साना छोरीहरुको...
२२ साउन - टुइटरमार्फत बिहानै थाहा भयो। पेट्रोलको भाउ घटेछ, त्यो पनि दुइ दुइ रुप्पे। मन एकछिन फुरुङ्ग भो। तर त्यो दुई रूप्पे घटेपछि हुने दर सम्झेर एकैछिन मै सुरूप्पै भो। रू उनान्सय बाट रू सन्तानब्बे त हो नि। कत्ति न हो र? कार्यालय जाने समय भइसकेको थियो। सल्लाघारीबाट टेकुसम्मको बाटो समान्यतया मेरा लागि...
जब म ‘न्युड विच’ पुगेँ, नभागी सुख्खै भएन
२१ साउन - बिहान उठ्ने बित्तिकै मोबाइल निकालेँ अनि मौसमको भविष्यवाणी हेरेँ। ओहो ! आज त एकाबिहानै टहटह घाम लाग्नेवाला रैछ। खुसी हुँदै भ्यालको पर्दा खोलेर हेर्छु त, कालो बादल मडारिएर पानी झर्नै आँटेको। प्रकृतिका अगाडि विकसित देशको टेक्नोलोजीले पनि हावा खाँदो रहेछ। यदि, मान्छेको वशमा हुँदो हो त उसले प्रविधिको...
भत्काएर हैन राम्रा गुण जोगाएर हो 'हामी' बन्ने
१८ साउन - अहिले एउटा लहर चलेको छ। पश्चिमा जगतमा त्यहाँको विशेष परिस्थिति र ऐतिहासिक अनुभवका क्रममा विकास भएका कुराहरू सिधा नेपालमा ल्याएर व्याख्या गर्ने हावा जोडसँग चलिरहेको छ। २-४ वटा परिवेशमा मात्र काम गरेका नयाँ-नयाँ व्याख्या टपक्क टिपेर नेपाली समाज होँडल्ने प्रयास बलियो बनाइएका छन्।
अफ्ठेरो लाग्छ? मेरो स्तन नहेर
१५ साउन - अमेरिकाको हेलेना हाइस्कुल पढ्ने क्याटलिनले स्कुलमा ब्रा नलगाउने अभियान चलाएर विश्वलाई नै छक्क पारिन्। ‘मैले स्कुलमा नो ब्रा डे आयोजना किन गरेँ’ शीर्षकमा डेढ महिनाअघि गार्जियनमा उनले एउटा ब्लग लेखिन्। ब्लगको भावानुवाद–
त्यसैले त डिजिटलसँग लड्न आएँ
३१ असार - ‘पेसा भनेको यात्राको अर्को सुन्दर नाम हो। त्यसैले त्यहाँ घुम्तीहरु हुँदा झन् रमाइलो हुन्छ।’
नाँचुनाँचु लाग्यो मलाई, पिरतीको रङ्गीन देशमा
२७ असार - बिहानैदेखि कार्यक्रम चल्दै थियो। बोझिलो भएको दिमागलाई अलिकति मनोरन्जन दिन, मोबाइलमा फेसबुक खोलेँ। सबैभन्दा माथि नै समाचार पढेँ, 'प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सोमबार औपचारिकरुपमा आफ्नो जिम्मेवारी प्रारम्भ गरेकी छन्। कार्की इतिहास रच्दै सर्वोच्च अदालतको